Maxaan ka naqaannaa labada Agaasime ee loo wada magacaabay halka xil ee NISA?!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Maxaan ka naqaannaa labada Agaasime ee loo wada magacaabay halka xil ee...
Maxaan ka naqaannaa labada Agaasime ee loo wada magacaabay halka xil ee NISA?!!
(Hadalsame) 08 Sebt 2021 – Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) ayaa waxaa xilka Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Soomaaliya (NISA) u magacaabay raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka dib markii uu soo saaray warqad uu shaqada si ku meel gaar ah uga joojinayo Agaasimhii hay’adda NISA Fahad Yaasiin.
Fahad iyo hay’adda uu hogaaminayay ayaa lagu eedeeyay kiiska Ikraan Tahliil oo la la’aa muddo dhowr bilood ah. NISA ayaa sheegtay in gabadhaas ay dileen xooggaga Al-Shabaab, warkaas oo uu beeniyay ururka dagaalka kula jira xukuumadda Soomaaliya iyo ajaaniibta taageerta.
Hase yeeshee Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) ayaanan ilaa haatan wax jawaab oo rasmi ah ka bixinin xilka uu raysal wasaaraha u magacaabay lamana oga in xafiiska NISA uu tagi doono iyo in kale.
Dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayaa xalay si kumeelgaar ah xilka uu banneeyay Fahad ugu magacaabay Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, oo ahaa Taliyaha Nabad Sugidda ee Gobolka Banaadir.
Waxayna tallaabadaasi sii cakireysa xiisadda ka aloosan Hay’adda Nabad sugidda oo waxaa la is weydiinayaa maxaa dhici karaa haddii labada agaasime ee ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo raysal wasaaraha ay isugu yimaadaan xafiiska?
Waa kuma Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe)?
Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) waa siyaasi horena uga mid ahaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Hadda waa Agaasimaha Guud ee Wakaaladda Dhismaha iyo Horumarinta Soomaaliyeed, waxaana xilkaas sannadkii 2019-kii u magacaabay raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Laba jeer ayuu soo noqday Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu soo noqday Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka intii u dhaxeeysay 2013 ilaa 2014.
Wuxuu gaaray darajada ugu sareysa ee Gaashaanle Dhexe, wuxuuna noqday Taliyahii Guud ee kaliya tan iyo Raiisul Wasaarihii hore Maxamed Cali Samatar.
Wuxuu ka soo shaqeeyay Booliiska Soomaaliya laga soo bilaabo 1975 ilaa 1991, iyo intii u dhaxeeysay sannadadii 2000 ilaa 2013.
Intaas ka hor, wuxuu ahaa Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ka hor inta uusan noqon Wasiir Ku -xigeenka Horumarinta Bulshada Soomaaliyeed.
Bilowgii bishii Ogosto 2012, wuxuu bilaabay inuu xildhibaan ka noqdo Golaha Shacabka ama Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Bishii May 2013, Bashiir waxaa loo magacaabay Agaasimaha cusub ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA).
9-kii Luulyo 2014, ka dib markii la sameeyay dib -u -habayn xagga amniga ah, Bashiir Goobbe waxaa laga beddelay taliyaha sirdoonka iyadoo xilkii uu hayay loo dhiibay Cabdullaahi Maxamed Cali.
Maxaa laga yaqaanaa Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud?
Yaasiin Faray wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir
Yaasiin Cabdullaahi ayaa waxaa uu Hay’adda Nabad Sugidda xilligii uu agaasimaha ka ahaa Cabdiraxmaaan Maxmuud Tuuryare.
Wax badan lagama yaqaano mas’uulkan, oo aan ka ahayn in uu lasoo shaqeeyay labadii taliye ee Tuuryare iyo Fahad Yaasiin.
Previous articleSIR CULUS: Sida ay Pakistan ku heshay hubka nukliyeerka ah oo la kashifay (Pakistan oo adeegsatey qalab ay CIA-du lahayd)
Next articleNin tagsiile ah oo gabar rakaab ah kufsaday oo la xukumay & dood yaab leh oo uu keenay (Dhegeyso)